MOETHIHAAUNG: မြောက်အမေရိကတိုက်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အအေးလွန်ကဲမှု
(၁) မြောက်အမေရိကတိုက်တွင် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ အအေးလွန်ကဲမှုမှာ အလွန်အေးသော အာတိတ်ဒေသမှလေများတိုးဝင်မှု(Arctic Blast) ဟုခေါ်လေ့ရှိတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) မြောက်အမေရိကတိုက်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အအေးလွန်ကဲနေတဲ့ ဒေသတွေမှာ အအေးဆုံးအပူချိန်ကျဆင်းမှုအနေနဲ့-28 deg C အထိတိုးတာ ရရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာတော အပူချိန်ကျဆင်းမှုဟာ ပိုကျဆင်း သွားလေ့ ရှိပြီး ဒေသအချို့တို့မှာ - 40ိdeg C အထိရှိခဲ့လို့ လူအသေအပျောက်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
(၃)Great Lake အတွင်း ရေခဲမှုဧရိယာပမာဏလေ့လာမှုများအရ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ဟာ ၁၉၉၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ အအေးဆုံးနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲတဲ့ (၃၃)နှစ်အတွင်း လက်ရှိ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ထက်ပိုအေးတဲ့ နှစ်တွေကတော့ ၁၉၈၁၊ ၁၉၈၈၊ ၁၉၉၀ နှင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တို့ဖြစ်ကြပြီး၊ အားလုံးတွင် ၁၉၈၁ ခုနှစ်ဟာ အအေးဆုံးနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) Great Lake အေပ်ါရေခဲမှုကတော့ ဆက်လက်ရှိနေသေးပေမယ့် အအေးဓါတ်တွေကတော့ ပြန်လည်လျော့ကျလာနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မေးခွန်း(၂)ခု မေးစရာရှိနေပါတယ်။
(၁) ဒီအအေးဓါတ်တွေ မြန်မြန် ပြန်လာဦးမလား?
(၂) အဲဒီအအေးဓါတ်တွေ အာရှဒေသဖက် ကူးလာဦးမလား?
Posted by Myo Lwin Aung at 12:17 PM